सेञ्चुरी बैंकद्वारा विश्व मुटु दिवसको उपलक्ष्यमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर « News24 : Premium News Channel
सेञ्चुरी बैंकद्वारा विश्व मुटु दिवसको उपलक्ष्यमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले विश्व मुटु दिवस २०१८ को उपलक्ष्यमा बैंकको प्रधान कार्यालय पुतलीसडकमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको छ । शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रबाट वरिष्ठ कार्डियोलोजिष्ट डा. बिनय कुमार रौनियार लगायत सम्पूर्ण टिमको सहयोगमा सो स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको थियो ।
बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सञ्चालित शिविरमा E.C.G. तथा मुटु सम्बन्धी अन्य स्वास्थ्य परीक्षण पनि गरिएको थियो । ग्राहकवर्ग, शेयरधनी, कर्मचारी लगायत सर्वसाधारण गरी उक्त शिविरमा १५० जनाभन्दा बढीको निःशुल्क स्वास्थ्यपरीक्षण गरिएको थियो ।
बैंकले काठमाडौं उपत्यकामा १२ शाखाहरु र ६ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टरहरु र उपत्यका बाहिर ९२ शाखाहरु र २ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टरहरु साथै १० वटा शाखारहित बैंकिङ्ग गरी जम्मा १२२ स्थानबाट कारोबार सञ्चालन गरिरहेको छ ।
नेप्से १८ अंकले बढ्दा कारोबार रकम ६ अर्ब माथि
काठमाडौँ । सेयर बजार परिसुचक नेप्से १८.०६ अंकले बढेर २,७६९.१३ विन्दुमा बन्द भएको हो ।
काठमाडाैं । नेपाली बजारमा दसैँपछि लगातार बढेको सुनको मूल्य आज प्रतितोला रु ६०० ले घटेको छ
न्यायाधीशको भद्र अवज्ञाले ३ दिनदेखि इजलास प्रभावित
एमाले अधिवेशन : यसकारण चाहन्छन् ओली ‘सर्वसम्मत नेतृत्व’